Xisbiyada Mucaaradka oo war kulul ka soo saarey tacadiyada ay geystaan Ciidamada Itoobiya – Banaadir weyne
Xisbiyada Mucaaradka oo war kulul ka soo saarey tacadiyada ay geystaan Ciidamada Itoobiya
Muqdisho – Xisbiyada Isbaheysiga mucaaradka ah ee kala ah Madasha Xisbiyada Qaran oo ay hoggaamiyaan Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya,Xisbiga Wadajir ee Siyaasiga C/raxmaan Cabdi Shakuur, isbaheysiga isbeddel doonka 1-da Luulyo iyo Hiigsi ayaa cambaareeyey Ciidamada Itoobiya ee aan ka mid aheyn AMISOM ee jooga Gudaha dalka Soomaaliya.
Qoraal dheer oo ku qoran luuqada Inglish-ka oo ay soo saareen una direen Labada Aqal ee Baarlamaanka iyo Midowga Yurub lana ogeeysiiyey Golaha Amniga Q/Midoobay, UNSOM, UK, Mareykanka,ururka Dalalka Islaamka, Midowga Yurub, iyo dalalka ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa waxaa lagu cambaareeyey Ciidamada Itoobiay ee jooga Soomaaliya kana tirsaneyn AMISOM,kuwaas oo tacadiyo kala duwan ka geysta Soomaaliya.
Xisbiyada Isbaheysiga Mucaaradka ayaa waxaa ay sheegeen in Ciidamada Itoobiya ee aan kamid aheyn Soomaaliya ay u arkaan kuwo dalka Soomalaiya si xoog ah ku jooga sida ay doonaana ka yeesha.
Sidoo kale waxaa ay sheegeen in joogitaanka Ciidamada Itoobiya ay halis weyn ku tahay qaranimada iyo midnimada dalka Soomaaliya,sidoo kalena loo adeegsado doorashooyinka Maamul Goboleedyada,isla markaana ay faragelin toos ah ku sameeyaan arrimaha Soomaaliya.
Ugu dambeyn waxaa ay cambaareeyeen falkii Ciidamada Itoobiya ay kusoo rideen degmada Bardaale Diyaaradii African Airweys,sidoo kale ay sheegeen inay tacadiyo ka geystaan Soomaaliya,waxaana wakiilka Midowga Afrika ee Arrimaha Soomaaliya ku eedeeyeen in uu ku guuldareystay waxka qabashada tacadiyada ay geystaan Cidianka Itoobiya en kamid aheyn AMISOM.
Hoos Ka Akhriso Qoraalka ay Isbaheysiyada xisbiyada Mucaaradka soo saareen.